InfoAmazonia : Labôratoara Madinika Hanarahana Maso Ny Rano Ao Tapajos sy Amazônaa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Mey 2015 12:49 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Português
Ny fihaonan'ny rano avy amin'ny renirano Tapajós sy Amazone, ao Santarém. Sary: Giovanny Vera/InfoAmazônia
Lahatsoratra nosoratan'i Giovanny Vera ary navoaka voalohany tao amin'ny bilaogy Infoamazonia. Naverin'ny Global Voices navoaka ao anatin'ny fifanarahana mifampizara votoaty.’
Santarém: tanàna faharoa any amin'ny fanjakàn'i Pará, no mpitazana am-pahatoniana ny fifanorohan'ireo roa goavana ao Amazonia, renirano roa izay misangy ny ala eny am-pandehanany mamakivaky kilaometratra arivoarivo. Manoloana io sehatra misy mpanatrika/mponina efa h0 300.000 io no ambohi-pihaonana farany ho an'ireo renirano roa lehibe indrindra eto ambonin'ny tany, ny Tapajós sy ny Amazôna izay mitambatra mba hanome aina ny renirano iray mbola matanjaka be noho zareo hivarina any amin'ny ranomasimbe Atlantika rehefa aoriana. Toy ny hatrizay tao Amazônia, ireo renirano no mamelona sy mamono.
Ao Santaré, toy ny any amin'ireo tanàna hafa izay misy ireo vondrom-piarahamonina amoron-drano any amin'ny Amazôna faritra Breziliana, tsy fantatra mazava tsara ny taham-pahalotoan'ny rano, nateraky ny fihazakazahana malakin'ny fanorenana tanàna tsy nisy fanarahana maso sy tsy nisy drafitra narahana, ka nitarika tsindry mavesatra tamin'ireo loharano voajanahary sy niteraka aretina ary olana vaovao ho an'ireo mponina eny an-toerana.
Izany no antony hoe eto, amin'ny fihaonan'i Tapajos sy Amazôna, no nanomboka ny asa mivantana ataon'ny tetikasan'ny tambajotra InfoAmazônia.
“ Ny tanjonay dia ny hanara-maso ny kalitaon'ny rano sy hanome eo noho eo ho an'ny olona ny torohay mba hahafahany mitaky ny zony hanana fahasalamana amin'ireo mpitondra azy”. Izany no nohazavain'i Ricardo Guimarães, fantatra kokoa amin'ny anarana hoe Guima San, mpikarona ao anatin'ny ekipan'ilay tetikasan'ny tambajotra InfoAmazônia.
Ny tambajotra InfoAmazônia dia iray tamin'ireo mpandresy tamin'ny fifaninanana “Dona Sôsialy” notohanan'ny Google Brésil. Io tetikasa io dia mifototra amin'ny fametrahana fitaovam-pitiliana miisa 20 amin'ny vidiny azo lazaina ho mirary izay mandrefy ireo kasinga fizika sy simika vitsivitsy ao amin'ny Amazôna Breziliana mba handrafetana sarintany iray ametrahana ny kalitaon'ny rano sotroin'ny olona. Rehefa vita ny faminavinàna an'ireny kasinga ireny sy ny fikirakiràna ireo angon-drakitra voaray, dia atolotra avy hatrany ho an'ny daholobe ny vokatran amin'ny endrika SMS, ary mzava loatra fa amin'ireo tomponandraikitra ofisialy sy ny manampahefana isan-tsokajiny ao an-toerana.
Tena faran'izay manana ny lanjany ho an'ny fahasalamana sy ny fiainan'ny vahoaka manamoroana ny renirano io vokatra io, dia ireo olona izay miankina betsaka avy amin'ny vokatra an-drano ny fomba fiainany. Iray amin'ireo antony nanosika ny tetikasan'ny tambajotran'ny Info Amazonia hametraka labôratoara telo, teo anelanelan'ny 5 sy 12 Martsa, niarahana tamin'ireo vondrom-piarahamonina manamorona ireo renirano, sy nifanomezan-tànana tamin'ny ONG Joie et santé ary ny fiadidiana monisipaly misahana ny tontolo iainana ao Santarém sy Belterra.
Nandritra ireo andro fito ireo, nisy fikarakarana fihaonan'ireo fikambanana sy manampahefana samihafa tao amin'ny faritra mba hanapahana hevitra miaraka amin'izy ireo mikasika ny toerana tena mety amin'ilay fanarahana maso ny rano. Napetraka niaraka tamin'ny fanohanan'ny prefektiora tao an-toerana ny rantsana roa ho an'ny fanaovan-gazetin'olontsotra, ny tontolo iainana ary ny maha-olompirenena tao Santarém sy Belterra. Ity iraka ity dia tanteraka noho ny fifarimbonan'ny olona 100 teo ho eo: mponina teny amin'ny manodidina, tomponandraikitra tao an-toerana, tanora mpirotsaka an-tsitrapo ary mpikambana aminà ONG.
Miavaka ireny labôratoara ireny amin'ny firotsahana an-tsehatr'ireo mpandray anjara izay afaka nahavita tamin'ny herin'ny tenany ireo fitsirihana ny kalitaon'ny rano tamin'ny fampiasàna fitaovana amidy tonga dia vonona hita eny an-tsena. Izy ireo no nifidy ny faritra fandraisana ny santionan-drano ho tsirihana.
Niaraka tamin'ny fanampian'i Guima San, nahavita fitsirihana tamin'ireny santionan-drano ireny ireo mpandray anjara, tamin'ny alàlan'ireo ‘capteurs’ noforonina ho an'ny tetikasan'ny tambajotra InfoAmazônia. Azo natao araka izany ny nijery ny fiovaovan'ireo kasinga azo tamin'ny alàlan'ireo fitaovana amidy eny an-tsena sy nanamarina azy ireny tamin'ireo ‘capteur’ an'ny tetikasa.
ny maodely voalohany tamin'ireo fitsapàna an'ny tetikasan'ny tambajotra InfoAmazônia . Sary: Giovanny Vera/InfoAmazônia
Mpirotsaka an-tsitrapo miasa ho an'ny rantsana fanaovan-gazetin'olontsotra sy ny fanarahana maso ny kalitaon'ny rano. Sary: Giovanny Vera/InfoAmazônia
Napetraka hiasa any amin'ireo vondrom-piarahamonina fito manamorona ny renirano ao amin'ny faritra Santarém ireo labôratoara fitsirihana ny kalitaon'ny rano : enina any amn'ny lembalemban'i Amazôna (Pixuna do Tapará, Nova Vista do Ituqui, São Josẽ do Ituqui, Pixuna do Tapará, Igarapé da Praia sy Castela) ary iray ao Tapajós (Alter do Chão).
Natsangana araka izany ny andiany iray ahitàna ireo mpirotsaka an-tsitrapo hanangona ireo ‘capteurs’ fijerena ny kalitaon'ny rano hapetraka any amin'ireo vondrom-piarahamonina. Ankoatry ny fanofanana fototra, nahavitra lahatsary enina ihany koa ny rantsan'ny fanaovan-gazetin'olontsotra, momba ny endrika miabo entin'ilay hetsika ho an'ny isam-batan'olona sy ho an'ny fiarahamonina. Azo jerena eto ambany ny iray amin'izy ireny.